विदेशी बुहारी र ज्वाइँलाई नागरिकता दिनै हुँदैनः गंगा चौधरी  Hamrosandesh.com
नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारतसँग रोटीबेटीको कुरा छ । हम्रो चेलीहरू भारतमा विवाह गरेर जान्छन् । तिनीहरूले सधैँ नागरिकताको लागि छटपटाइ राख्नुपर्ने अवस्था छ । तिनीहरूको लागि नागरिकता लिन १५ वर्ष लाग्छ । उदाहरणको लागि सोनिया गाँन्धी अंगिकृति नागरिक भएकै कारणले प्रधानमन्त्री बन्न पाएकी छैनिन् । हाम्रो देशमा यस्तो संवेदनशील अवस्थामा नागरिकता किन खुकुलो बनाउने ? नागरिकता वितरणको क्षेत्राधिकार तोकिनुपर्छ । विवाह गरेर आउने चेली वा बुहारीलाई पनि १५–२० वर्षसम्म नागरिकता दिइनु हुँदैन । उदाहरणका लागि भनौँ मेरो छोरा छ । बुहारी पनि आउँछिन् । मेरो बुहारी बाहिरी देशबाट आयो भने उसले पनि १५ वा २० वर्षमा नागरिकता पाउनका लागि कुर्नु पर्‍यो । प्रक्रिया जानु पर्‍यो । विदेशी ज्वाइँको कुरामा उदाहरणको लागि मलाई थाहा छ उ विदेशी नागरिक हो । म विदेशी नागरिक हो भन्दाभन्दै प्रेम वा विवाह गरेपछि त्यही देशको नागरिक हुन्छ नि । होइन र ?
त्यो अर्को देशको नागरिक अर्थात ज्वाइँलाई नेपाली नागरिक किन बनाउने ? किन नेपाली नागरिकता दिने ? दिनु हुँदैन । तिनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा नागरिकता दिनु हुँदैन । सरकारले अन्तरिम संविधानमा नागरिकता ऐन ल्याएको थियो । त्यसलाई यथाशीघ्र खारेज गरिनुपर्छ । अन्तरिम संविधानलाई टेकेर त्यस बेला ४०–५० लाखलाई नागरिकता दिइएको छ । त्यस बेला वितरण गरिएको नागरिकता खारेज गरिनुपर्छ । आफू लोकप्रिय हुन र निर्वाचनमा जित्नका लागि ०६२–६३ को आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानमा नागरिकताको खुकुलो व्यवस्था राखेर वितरण गरिएको नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ ।
नागरिकतामा एकदमै कडा व्यवस्था राखिनुपर्छ । एनजिओले मागेअनुसारको व्यवस्था गर्नै हुँदैन । नागरिकतामा एनजिओहरूको निहीत स्वाथ लुकेको छ । नेपालको राष्ट्रयता र नेपाली समाज तथा संस्कृतिमा उनीहरूले नागरिकतामार्फत बिग्रह ल्याउन चाहन्छन् । नेपाली नागरिकता प्यारो हुने महिला वा पुरुषलाई किन विदेशीसँग विवाह गर्नुपर्‍यो ? नेपालकै माया छ भने नेपालीभित्र विवाह गर्न सकिन्छ । तिनीहरूलाई थाहा छ कि म विदेशी बन्न जाँदै छु भन्ने थाहा हुँदा हुँदै नेपालको नागरिका किन खोज्नु पर्‍यो ? मेरो टाउको त्यहाँ दुःखेको छ । मेरा नातेदारहरू अमेरिका, युरोप, भारतलगायतका देशमा छन् ।
विवाह गरे पनि गएका छन् । मेरै छोरीको नन्द पनि विवाह गरेर विदेशमा गएकी छिन् । तर, उनी थारु भएकै कारण विदेशी ज्वाइँलाई लिएर नेपालमा मेरो पतिलाई पनि नागरिकता देउ भनेर नेपालमा नागरिकता खोज्न आएकी छैनन् । विदेशी ज्पाइँ र बुहारीलाई नेपालमा नागरिकता खोज्नुको कारण के हो ? ती एनजिओवाला अधिकारकर्मीहरूले जवाफ दिनुपर्छ ।